Sithanda Okwasekhaya: masibingelele i-Aloo Bonda
Partnered Content | September 28, 2021
Ngokuzayo mhla uzizwela uhalela into ebabayo, vele uziphekele lo ncamnce owehla esiphundu wamazambane ahlofozelayo athoswe ngamafutha amaningi.
Njengoba lo ncamnce uyisidlo esidabuka eningizimu nelaseNdiya, lo ncamnce wabantu abangayidli inyama uhlanganiswe ngobunyoninco nokudla kwesintu kwaseNingizimu Afrika, okuyibhodwe elehlukile eliconsisa amathe elixube imibono evela kumasiko ahlukene.
I-Aloo Bonda yenziwa ngokuhlanganisa imasala yamazambane (inhlanganisela yamazambane, amakinati e-cashew, ujinja, ugaligi, upelele omusha kanye nezipayisi), ukugoqa ingxube ibe amabhola, bese athoswe emafutheni amaningi aze abukeke ezohlofozela abe wumbala o-golden brown efakwe phakathi kukaketshezi kafulawa othambile owenziwe ngofulawa we-chickpea. Iphake ishisha bhe ne-tomato sauce noma u-chutney ophekwe ekhaya.
Ukudla kuyinto emnandi esihlanganyela kuyo sonke njengezakhamizi zaseNingizimu Afrika. Yizithako ezisihlanganisayo. Thola okunye ngamasiko anzulu ezidlo nezindaba zaseNingizimu Afrika eziyigugu ku-https://bit.ly/3jf2Qkv
Iphakelwa abantu abayi-10, njengoncamnce
Ukuze wenze imasala yamazambane:
10ml (amathispuni ama-2) e-sunflower oil
5ml (ithispuni eli-1) lama-mustard seeds
2.5ml (ithispuni eliwu-½ )lama-cumin seeds
2.5ml (amathispuni awu-½) wama-coriander seeds, agayiwe
amaqabunga kakhari anele isandla, aqotshiwe
amakinati e-cashew ayisi-6, agaywe aba mahhadlahhadla
u-anyanisi omncane o-1, oqotshisisiwe
ucezu lukajija omusha olungu-2.5cm, oluqotshisisiwe
upelepele oluhlaza o-1, oqotshisisiwe
2.5ml (ithispuni eliwu-½ ) e-Robertsons Turmeric
2.5ml (ithispuni eliwu-½ ) e-Robertsons Peri-Peri
1.25ml (ithispuni eliyi-¼ ) e-Rajah Mild Masala Curry Powder
2ml kasawoti, ukuze kunambitheke
350g wamazambane (3 aphakathi nendawo ngobukhulu) abilisiwe, ahlutshwa bese agaywa
30ml (izipuni ezi-2) zamaqabunga e-coriander, aqotshisisiwe
15ml (isipuni esi-1) sejusi kalamula
Ukwenza uketshezi kafulawa:
250ml (inkomishi e-1) kafulawa we-chickpea (ufulawa we-besan noma we-gram)
60ml (i-¼ yenkomishi) e-cornflour
1.25ml (i-¼ lethispuni) e-Robertsons Peri-Peri
1.25ml (i-¼ lethispuni) e-baking soda
5ml (ithispuni eli-1) le-vegetable oil
enye i-vegetable oil, yokuthosa emafutheni amaningi
Qala ngokulungisa imasala yamazambane. Bilisa amafutha epanini elikhulu bese uthosa ama-mustard seed, ama-cumin seeds, ama-coriander seeds kanye namaqabuka kakhari. Qaphela ukuthi ungazishisi izipayisi.
Faka ama-cashew agayiwe bese uthose aze abe golden brown. Manje faka u-anyanisi, ujinja nopelepele, bese ugovuze kuze kuthambe.
Faka i-Robertsons Turmeric, Robertsons Peri-Peri, Rajah Mild Masala Curry Powder nosawuti, ugovuze, bese upheke umzuzu owodwa. Faka namazambane agayiwe, amaqabunga e-coriander kanye nejusi kalamula bese ugovuze kahle. Beka eceleni ukuze kuphole.
Ukwenza uketshezi lukafulawa, hlanganisa zonke izithako esitsheni bese ugovuze kuze kube bushelelezi.
Bilisa amafutha ebhodweni. Enza ingxube yamazambane ibe ngamabhola bese uthathe ibhola ngalinye ulicwilise kuketshezi olungisiwe. Thosa amabhola emafutheni amaningi ashisayo, faka ngamaningana, aze ahlofozele futhi abe golden.
Iphake ne-tomato sauce noma u-chutney.
Klala izinga lamaphuzu futhi ubuyekeze le risiphi ye-Aloo Bonda ku-https://bit.ly/3k7wnMg
Sithanda Okwasekhaya: yizwa ukudla kwaseKapa nge-Akhni eletha injabulo